မိုက်မဆုံး လူမုန်း - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ကျုပ်နာမည်လား …..? သိချင်တယ်ပေါ့ ….. ဟုတ်လား…..? ကျုပ်နာမည် မပြောခင် အခု ကျုပ်ရောက်နေတဲ့ နေရာ အရင်ပြောပြရမယ်။ အခု ကျုပ်အကြောင်းကို အခုလို အေးအေးဆေးဆေး နေရတဲ့ ထောင်ထဲ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ပြောပြရမယ်ဗျ။ ထောင်ထဲမှာက အပြင်လို မဟုတ်ဘူးလေ ။ ဘယ်မှ မသွားရ ၊ မလာရ ၊ မလုပ်ရ၊ ကိုယ်စားချင်တာ မစားရ ၊ မသောက်ရဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြန်တွေးမိတယ်ဗျာ။
ကြာပါတယ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့လဲ ကျုပ်အကြောင်း သိချင်နေလောက်ပြီ။ ကျုပ် အကြောင်းကတော့ ဒီလိုဗျ။ ကျုပ်နာမည်က လူမုန်း ။ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် လူတကာ အော့ကြောလန်လေ ။ လူဆိုး လူမိုက် တစ်ယောက်မို့ လူတကာက ရွံကြောက်ကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့ ။
ကျုပ်တို့က ရွာအပြင်နေတာဗျ ။ ကျုပ်တို့ဆိုတာ ကျုပ်မိန်းမရယ် ကျုပ်ရဲ့ လိုက်ပွဲ ဖြစ်လာမယ့် ကျုပ်ခယ်မလေးရယ် ။ ကျုပ်ဆိုတဲ့ အကောင်က လူဆိုး တစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေတာ ယူထားတဲ့ မိန်းမကတော့ ရွာရဲ့ အချောဆုံး အလှဆုံး ကွမ်းတောင်ကိုင် ပန်းတောင်ကိုင် အကိတ်ကြီးကို ယူထားတာဗျ။
ကျုပ်က ချစ်တော့ ကြိုက်တော့ သူချစ်တာ မချစ်တာ မသိဘူး ဇွတ် အဓမ္မ ယူခဲ့တာလေ။ အခုတော့ ဟဲ ဟဲ ကျုပ်မိန်းမ ဖြစ်နေပြီလေဗျာ ။ ကျုပ် ခယ်မလေးကလည်း သူအစ်မ တူတယ် ။ အချော အလှ အကိတ်လေးပဲ။ ကျုပ်ကို ကြောက်တာနဲ့ ဘယ်သူမှ ခယ်မလေးကို မထိရဲဘူး ။
ဒါနဲ့ ကောင်းခန်းလေး မလာခင် ကျုပ်အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြရမယ်။ ဒါမှ ကျုပ် ဘယ်လောက်ထိ ရက်စက် ယုတ်မာတယ်ဆိုတာ သိမယ်လေ။ ဘုရားတရား သိဖို့နေနေသာသာ အရက်သောက်၊ ဖဲရိုက် လောင်းကစား လုပ်နေရတာနဲ့ မအားရပါဘူးဗျာ။
စီးပွားရေး ဘာလုပ်လဲ ဟုတ်လား?။ ဂွင်ကောင်းရင် ဓားပြတိုက်တယ်။ ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်က ခေါင်းဆောင်ဗျ ။ တပည့်ကို အများကြီး မထားဘူး ။ လေး ငါးယောက်လောက်ပဲ ။ ကျုပ်ကို လူတွေအမြင်တော့ လက်မရွံ သားသတ်သမားပေါ့ ။ ဆိုဆုံးမမည့်သူ ရှိဖို့နေနေသာသာ ကျုပ်ကလည်း တစ်ကောင်ကြွက်၊ ကျုပ်မိန်းမကလည်း ညီအစ်မ နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ကျုပ်အတွက် လောကမှာ တွယ်တာစရာ မရှိပါဘူးဗျာ။
တစ်ကောင်ကြွက် မျက်နှာမွဲဆိုတော့ ရွာက လူတွေက နှိမ်ချင်ကြတယ် ။ လူပျိုပေါက် အရွယ်ဆိုတော့ ရွာရဲ့ အလှပဂေးလေး ကွမ်းတောင်ကိုင် ပန်းတောင်ကိုင်ကို ရိုးရိုးသားသား သွားပိုးတာကနေ ဇာတ်လမ်းက စပြောရမယ်ဗျို့။ လူကို လူလို့ မသတ်မှတ်ပဲ ရွာက ကာလသား တသိုက်နဲ့ ထိုးကြ နပ်ကြရင်းနဲ့ ကျုပ် ထောင်ထဲ အထည့်ခံရတယ်လေ ။ နာကျည်းစရာ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေ ပေါ့ဗျာ။
ကံမျက်နှာပေးတယ်ပဲ ပြောရမလား ကျုပ်ကို တူလို သားလို ခင်မင်တဲ့ ဓားပြ ခေါင်းဆောင်နဲ့ သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့တယ် ။ ထောင်က ထွက်ပြီး သူနဲ့ ဆိုးတူကောင်းဖက် နေလာရင်း သူကွယ်လွန်တော့ သူ့ရဲ့ အရိုက်အရာကို ကျုပ်ကို ဆက်ခံစေပြီး ပညာအမွေ ပေးခဲ့တယ်။ တဖက်သားကို သနားညှာတာထောက်မှု ကင်းလာခဲ့တယ်လေ ။ အရင်က ပုံစံနှင့် ထောင်ထဲက ထွက်လာပြီး ဓားပြခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာတဲ့ ပုံစံက မိုးနဲ့မြေလို ကွာခြားသွားပြီ။
ကျုပ် ခေါင်းဆောင်ပြီး ပထမဆုံး တိုက်ရတဲ့ ရွာကတော့ ရွာသာယာ တဲ့ ။ ကျုပ်အပါ လူလေးယောက်နဲ့ပဲ အလုပ် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့က ရွာအစွန်းအဖျားမှာနေတော့ ကျုပ်တို့အတွက် အကြိုက်ပေါ့ဗျာ ။ လင်မယား နှစ်ယောက်တည်း ရှိတဲ့ အချိန်ပေါ့ ။ အချိန်အခါကောင်းကိုပဲ လေ့လာပြီး ပိုင်ပြီဆိုမှ အကွက်ချ တိုက်တတ်တာက ကျုပ်ဆရာရဲ့ မူဝါဒပဲလေ ။
“ဗျို့ ……. ကိုလှဆောင် ကိုလှဆောင်”
“ဟေ့ ……. အပြင်က ဘယ်သူတွေလဲ ဟ”
”ငါပါဟ…. ရွာသူကြီး သာဒင် ပါ။ မင်း ခြံဝင်းထဲ သူခိုးကပ်လို့ကွ “
”လာပါပြီ သူကြီး “
ရွာတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စည်းရိုးက ခနော်ခနဲ့ ရယ်ပါ ။ အိမ်မကြီး တံခါးခေါက်ပြီး လူရင်းပုံစံမျိုးနဲ့ ခပ်တည်တည် ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။
တံခါးဖွင့်လိုက်ရင်ပဲ သူထင်သလို သူကြီး မဟုတ်ပဲ ကျုပ်တို့ကိုတွေ့တော့ လန့်သွားတယ်။ လန့်လဲ လန့်ချင်စရာပဲလေ ။ လက်ထဲမှာက သေနတ်တွေ ဓားတွေနဲ့ ။ လူတွေကို မမှတ်မိအောင် မျက်နှာတဝက်ဖုံးတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ စွတ်ထားတယ်လေ။
”တိတ်တိတ်နေစမ်း၊ ဟေ့ကောင် တံခါးတွေ အကုန် ပြန်ပိတ်ထားစမ်း”
”ရှင်တို့ ရှင်တို့ ဘာလုပ်မလို့”
”ဖျန်း… ဖျန်း…. အားးးး”
”ကောင်မ တိတ်တိတ်နေစမ်း၊ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် လုပ်ရင် နှစ်ယောက်စလုံး ခေါင်းနဲ့ကိုယ် အိုးစားကွဲသွားမယ် သတိထားနေကျ”
ကျုပ်လူတွေကို အမိန့်ပေးရင်း လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်တယ်။ ကျုပ်တို့ပုံက လူမိုက်ရုပ်ပေါက်ကာ တကယ်လုပ်မည့် ပုံစံဖြစ်လို့ နှစ်ယောက်စလုံး တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားရင်း ကြောက်လန့်နေကြတယ်။
ကျုပ်ကောင်တစ်ကောင်ကို သူ့တို့ လင်မယား နှစ်ယောက်လုံးအား ကြိုးတုတ်ခိုင်းပြီး စောင့်ကြည့်နေစေတယ်။ ကျန်နှစ်ကောင်က ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေ နေခိုက် ကျုပ်ကတော့ ပါလာတဲ့ ပုလင်းကို သောက်ရင်း ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့လေး ဖြစ်နေတာကို ဇိမ့်ခံပြီး အရသာခံ ကြည့်နေမိတယ် ။
ကြည့်မိမှ ကျုပ်စိတ်ကို ထကြွစေတော့တယ်ဗျို့။ အဖိုးကြီးက သေခါနီးမှ ရိက္ခာ ယူနေတာပါလား…..။ကလေးမလေးက ငယ်ငယ်ချောချော အတောင့်အဖြောင့်လေး…။ ရွာသူသာဆိုတယ်ဗျာ အသားလေးက ဖွေးဖြူနေတာပဲ ။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ကျုပ်ကောင်ကြီးက ထနေတာပေါ့ ။ ကျုပ်ဆရာက ပစ္စည်းရရင် ပြီးရော…။ အခုတော့ဗျာ ကျုပ်က လူကိုပါ ရချင်လာတော့တယ်။
”နိုးဝမ်းရေ ကောင်မလေးကို ကြိုးဖြေပေးလိုက်ပါကွာ၊ သူ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေး လောက စည်းစိမ် ခံစားရအောင်လို့….. ပြီးရင်… ဟိုကောင် အပေါက်ကို မအော်နိုင်အောင် တစ်ခုခု ဆို့ထားလိုက်ကွာ”
”တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်၊ ကျွန်မတို့မှာ ရှိတဲ့ အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေ အကုန် ယူသွားကြပါ၊ ကျွန်မတို့ကို လွှတ်ပေးကြပါရှင်၊ အီးဟီးဟီးဟီး”
”ဟဲ ဟဲ မင်းလေးက သိပ်လှနေတော့ ဒီအတိုင်း ထားခဲ့ရမှာ နှမြောစရာကြီး”
”ရှင် ….. ရှင်တို့ မယုတ်မာနဲ့နော်၊ လွှတ် လွှတ်၊ ကျွန်မကို လွှတ် အီးဟီးဟီးးးးး”
နိုးဝမ်းဆိုတဲ့ ကျုပ်တပည့်က ကောင်မလေးအား လက်ပြန် တုတ်ထားသော ကြိုးကို ဖြည်ပေးလိုက်တယ်။ ကျုပ်က ကောင်မလေးရဲ့ ဆံပင်ကို စုကိုင်ပြီး သူတို့ ချစ်ပွဲဝင်တဲ့ အိပ်ယာပေါ် ပစ်တင်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးလည်း သူမရဲ့ ဆံပင်ကို ဆွဲထားသော ကျုပ်လက်ကို ကိုင်ရင်း မျက်နှာ ရှုံ့မဲ့ကာ တရွတ်တိုက် ပါလာတယ်။
“အစကတော့ သာသာယာယာလေး လုပ်ပေးမလို့ဘဲ၊ ဒါပေမယ့် မင်းက စောက်ကျော တင်းလွန်းတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ကိုင်ပေးရတာပေါ့”
“လွှတ် လွှတ် ……. ခွေးမျိုးတွေ ငါ့ကိုလွှတ်”
“အင့်…… ဝုန်းးးး အားးးးးး”
ကောင်မလေးလည်း အိပ်ယာပေါ် ခွေခွေလေး ပစ်ကျသွားပေမယ့် ချက်ခြင်း ဖင်ဒရွတ်တွန်းကာ နောက်သို့ ဆုတ်သွားပြန်တယ်။ ကျုပ်လဲ ခွက်ထဲရှိ လက်ကျန်အရက်ကို မော့ချလိုက်ပြီး
“အဲ့ကောင်မကို ပတ်လက်လှန်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးချည်ထားလိုက်စမ်း”
“မလုပ်နဲ့၊ မလုပ်ပါနဲ့ အီးဟီးဟီးးး”
ကောင်မလေးက ကြောက်လန့်တကြား ရုန်းကန်နေသော်လည်း ကျုပ်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့ နိုးဝမ်းနဲ့ နိုးတူး တို့ရဲ့ အားကို မတွန်းဖယ်နိုင်ဘူးလေ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ကုတင်တိုင်နှစ်လုံးမှာ ကားယားချည် ခံလိုက်ရတယ် ။ ကျုပ်လည်း ခါးပတ်ဖြုတ်ရင်း ကောင်မလေးအနား တစ်လှမ်းခြင်း တိုးသွားလိုက်တော့တယ်။
လက်က လှုပ်မရလို့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကွေးလိုက် ဆန့်လိုက်ဖြင့် ရုံးကန်နေတော့ ဝတ်ထားတဲ့ ညဝတ်ဂါဝန် ဒူးဖုံးလောက်ဟာလေးက လှန်လှန်သွားတယ်။ အောက်ခံပင်တီ အနက်ရောင်လေးအောက်က ဖောင်းမို့နေတဲ့ စောက်ပတ် အက်ကွဲကြောင်းကြီးကို အထင်းသား မြင်နေရလို့ ကျုပ်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံး လီးတောင်နေရတယ်။ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေးကြီးတွေကလည်း အသည်းယားစရာပဲ။ အရက်နှင့်အတူ တံတွေးကို မျှောချနေကြရတယ်ဗျာ။
“ရှင် …..ရှင် ……. အနားမကပ်နဲ့နော်”
လက်နှစ်ဖက် ကြိုးချည်ခံထားရလို့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်သာ ရုန်းကန်နိုင်ရှာတယ်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက် ရုန်းလိုက်တိုင်း ဂါဝန်လေးက လှန်သွားပြီး အောက်ခံပင်တီ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ စောက်ပတ် မို့မို့ဖောင်းဖောင်းကြီးက ကျုပ်တို့အတွက် သွားရည်ယိုစရာပဲ။ ကျုပ်ရဲ့ အဝတ်အစားများ ချွတ်နေတာကို ကြည့်ရင်း ကောင်မလေးတော့ ဆောက်တည်ရာ မဲ့နေတော့တယ်ဗျာ။
ကျုပ်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး အောက်ခံဘောင်းဘီသာ ကျန်တော့တယ်။ အောက်ခံ ဘောင်းဘီအောက်က ရုန်းကြွနေတဲ့ လီးဘုထစ်ကြီးက အသည်းယားစရာပဲ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် မုဒိန်းကျင့်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိက ကောင်မလေးကို ခြောက်လှန့်နေသလိုပါပဲဗျာ။ ကျုပ်ဘဝမှာလဲ အလိုမတူပဲ သူများ သားမယား မုဒိန်းကျင့်တာ ဒါပထမဦးဆုံးပဲဗျ။ ငရဲမကြောက်ဘူးလား မမေးနဲ့ ကြောက်စရာဆိုတာ ဘာမှန်းကို မသိတော့တဲ့ ဘဝ ရောက်နေပြီလေ။
“မလုပ်နဲ့၊ မလုပ်ပါနဲ့….အင့် …အားးးးး”
ရုန်းကန်နေသော ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ခြေကျင်းဝတ်မှ ဆွဲလိုက်ပြီး ကောင်မလေးအပေါ် တက်ခွလိုက်တော့တယ်။
“ဖျန်းးး ဖျန်းးး ဖျန်းးး ဖျန်းးးး အားးးးး”
ပါးကို ဘယ်ပြန် ညာပြန် လွှဲရိုက်ပစ်လိုက်တော့ ကောင်မလေးခေါင်း ဘယ်ညာ ရမ်းခါသွားတယ်။
“ဗျိ……… ဗျိ……… ဗျိ…….. ဗျိ…….”
ကောင်မလေးရဲ့ အင်္ကျီကို ရင်ဘက်မှ စုကိုင်ပြီး စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တော့ ဘရာအနက်ရောင် သေးသေးလေးအောက်မှ ရုန်းကြွနေတဲ့ နို့အုံ လုံးဝန်းဝန်းလေးက အသည်းယားစရာ။ ဘရာလေးကို အလယ်မှ ဆုပ်ကိုင်ကာ ဆွဲစောင့်ပစ်လိုက်တယ်။
“ဗျုတ် … ဗျုတ်….. ဗျုတ်…. အားးးးး”
လက်ထဲ ပြုတ်ပါလာတဲ့ ဘရာကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး ဟင်းရည်သောက် ပန်းကန်လုံးခန့် ကြီးမားသော နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ်လိုက်တယ်။ လက်ထဲမှာ အိထွေးထွေးနဲ့ ကိုင်လို့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။
“အားးးးး နာတယ် ……. အားးးးးးးးး”
နို့ကြီးများက နူးညံ့ပြီး ကိုင်ရတာ အားရစရာပဲ။ စူထွက်နေသော နို့သီးခေါင်းလေးများကို တစ်ဖက်စီ ကုန်းစို့ပစ်လိုက်တယ်။
“ပြွတ် ပြွတ်…….. ပြွတ် ပြွတ် …….”
“အီးဟီးဟီး မလုပ်ပါနဲ့ ……. မလုပ်ပါနဲ့……. အီးဟီးဟီးးးးး”
နို့စို့လို့ အားရတော့ အောက်ကို လျှောထိုင်လိုက်ပြီး ဂါဝန်ကို လှန်တင်လိုက်တော့တယ်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ ရုန်းကန်နေလို့ အောက်ခံပင်တီ အပေါ်ကနေ စောက်ပတ်ကြီးကို အားရပါးရ ဖျစ်ညှစ် ဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့ ကောင်မလေးခင်မျာ အတော်လေး နာကျင်သွားပြီး မရုန်းရဲတော့ပဲ ငြိမ်ကျသွားတော့တယ်။ ကျုပ်လည်း အဲ့အချိန်ကျမှပဲ ကောင်မလေးရဲ့ ပင်တီလေးကို ဆွဲချွတ်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်တော့တယ်။ အမွှေးများ ကင်းရှင်းနေပြီး စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးက အရည်တွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတော့တယ်။
“ငါ့ကောင်တွေ၊ ဒီမှာ ကြည့်ကြစမ်းဟေ့၊ သူကသာ မလုပ်ပါနဲ့ ပြောနေတာ၊ သူ့ စောက်ပတ်ကြီးက ခံချင်လွန်းလို့ စောက်ရည်တွေတောင် ထွက်နေပြီ ဟားဟားဟား”
“မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး အီးဟီးဟီးဟီးးး”
“ဟားးး ဟားးး ဟားးး”
ဝိုင်းပြီးကြည့်ကာ သဘောကျ ရယ်နေတဲ့ ကျုပ်ကောင်တွေ အသံက ဆူညံပေမယ့် အိမ်ခြေဝေးလို့သာ တော်သေးတယ်ဗျ။ ကျုပ်လည်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်တော့တယ်။ ရှည်ပြီး အကျောပြိုင်းပြိုင်းထနေတဲ့ လီးကြီးက မာန်ဖီနေသည့် မြွေကြီးအလား ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ယောကျ်ားဖြစ်သူထက် ရှည်ပြီး တုတ်သော လီးကြီးကို မြင်လိုက်ရလို့ ကောင်မလေး မျက်လုံး ပြူးသွားပါလေတော့တယ်။
ကျုပ်ရဲ့ လီးတန်ကို ဂွင်းတိုက်သလို ရှေ့နောက် ပွတ်ဆွဲပြီး ကောင်မလေး ပေါင်ကြား ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်တော့တယ်။ လက်က စောက်ပတ်ဆီ ရောက်သွားပြီး စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားကို ဖြဲလိုက်တော့ စောက်စေ့လေး ပြူထွက်လာတယ်။ စောက်စေ့လေးကို ကျုပ်လီးဒစ်ဖူးကြီးနဲ့ လေးငါးချက် ကော်ထိုး ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပြီး ဒစ်ဖူးကြီးကို စောက်ခေါင်းအဝတေ့ကာ ဆောင့်ထိုးသွင်းလိုက်တော့တယ်။
စောက်ခေါင်းကျည်းကျည်းလေးထဲ ကျုပ်ရဲ့ လီးတန်ကြီးက မဆန့်မပြဲ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း အတင်းတိုးဝင်သွားတော့တယ်။ လင်ရှိ မယားသာ ဆိုတယ် စောက်ပတ်လေးက အပျိုစင်လေးလိုပဲ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလှတယ်ဗျာ။
“ပြွတ် ဇွပ် …….”
ကောင်မလေးရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကို ကိုင်းလိုက်ရာ ကောင်မလေးရဲ့ ဒူးခေါင်းနှစ်လုံးမှာ သူမ မျက်နှာနား ကပ်သွားတော့တယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာဘေး အိပ်ယာပေါ် လက်ထောက်ပြီး အားပါးတရ ဆောင့်ဆောင့် လိုးသွင်းလိုက်တော့တယ်ဗျာ။
“ပြွတ်စ် ဗြိ ဗြိ”
“အားးးး အီးးးးးဟင့် ကျွတ်စ်…..”
“အူးးးး ဟူးးး ဟူးးးဟူးးးးး”
မိုးမျှော်သလို ဖြစ်နေတဲ့ စောက်ပတ်ထဲ လီးတန်ကြီးကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့် ဆောင့် လိုးသွင်းလိုက်တိုင်း ဒစ်ဖူးကြီးက သားအိမ်ကို အရှိန်ဖြင့် အထိမိဆုံး ဝင်ဝင်ဆောင့်တယ်။ လီးတန်ကြီး စောက်ပတ်လေးထဲ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ကောင်မလေး အသံကုန် အော်ဟစ် ညီးညူနေတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး လိုးရတာက အရသာ ရှိလှလွန်းလို့ အားရပါးရ လိုးဆောင့်နေမိတယ်ဗျာ။
ဆယ်မိနစ်သာသာလောက် ဆောင့်လိုးပြီး တအားကောင်းလွန်းတာကြောင့် မထိန်းနိုင်တော့ပဲ စောက်ပတ်လေးထဲမှ လီးတန်ကြီးကို ထုတ်ကာ ကောင်မလေး မျက်နှာပေါ် ခွပြီး ဂွင်းတိုက်ပြီး လရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တော့တယ်။
“အားးးး ရွီးးးးးး ဟားးးးးးးး”
“ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်ကွာ၊ ရှီးးးးးး ကဲ နိုးဝမ်းရေ ဒီတစ်ခါ မင်းအလှည့်”
“ဟုတ်……ဆရာကြီး ငါ့ကောင်တွေ မင်းတို့လည်း အသင့်ပြင်ထားဟ”
“စိတ်ချပါ ကိုကြီး ဟီးဟီးဟီး”
ကျုပ်ကောင်တွေရဲ့ ဘောင်းဘီတွေ ချွတ်လိုက်တော့ ကောင်မလေး လန့်သွားလောက်တယ်ဗျ။ တစ်ကောင်မှ လီးသေးတာ မပါဘူးလေ။ အားလုံးရဲ့ လီးတန်တွေက ကျုပ် လီးနဲ့ အရှည်ရော တုတ်တာပါ နီးနီးတူနေတာဗျ။ လီးတန်များကို ကြည့်နေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း လေထဲမြောက်သွားပြီး စောက်ပတ်လေးထဲ နိုးဝမ်း လီးတုတ်တုတ်ကြီး ဝင်ရောက်သွားလေတော့တယ်။
“ပြွတ် ဖွတ် ဖွတ်”
နိုးဝမ်းလဲ ပြီးသွားပြီး နားချိန်တောင်မရပဲ ကောင်မလေးရဲ့ စောက်ပတ်ထဲ ကျန်တဲ့ကောင်တွေလီးများ တစ်ချောင်းပြီး တစ်ချောင်း အဆက်မပြတ် လိုးသွင်းနေတော့တယ်။ ကျုပ်ကောင်တွေရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းလွန်းတော့ ကောင်မလေးရဲ့ နို့အုံကြီးများ ရမ်းခါနေတာပဲ။
ကောင်မလးရဲ့ နာကျင်စွာ အော်ဟစ်ညီးသံ သဲ့သဲ့လေးက လိုးနေသူကို ရမ္မက်ထန်စေတယ်လေ။‌ ကောင်မလေး သိစိတ်က မုဒိန်းကျင့်ခံနေရတာကို မနှစ်မျို့ပေမယ့်လည်း စောက်ပတ်က ကာမအရသာကို ခံစားမိနေတော့ ဆောင့်ချက်တိုင်းကို ဖင်ကြီးက မသိမသာ ကော့ကော့ ခံပေးနေလေတော့တယ်။ နောက်ဆို သူလင်နဲ့ လိုးတိုင်း ကျုပ်တို့ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကို သတိရနေလောက်တယ်။
“ပြွတ် ဖတ် ဖတ်”
“အားးးး ရှီးးးးးး အူးးးးးး”
လီးဝင် လီးထွက်သံတွေ အသားချင်းထိ ရိုက်ခပ်သံတွေက မြိုင်ဆိုင်နေသလို ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာလည်း မျက်ရည်တွေနဲ့အတူ လရည်တွေ ပေပွနေတော့တယ်။ ပါးစပ်ထဲလည်း လရည်တွေ ဝင်ကုန်တယ် ထင်တယ်ဗျ။
အံမယ် ကျုပ်ကောင် နိုးဝမ်းက တစ်ချီ ပြီးထားတာကို အားမရပဲ နိုးသရီး လိုးဆောင့်နေတုန်း ကောင်မလေး ပါးစပ်ထဲ သူ့လီးထည့်ပေးပြီး စုပ်ခိုင်းနေလေရဲ့။ ခံနေရတဲ့ ကောင်မလေးတော့ မသိဘူး ကျုပ်တောင် သူတို့ကို ကြည့်ပြီး လီးက ပြန်တောင်နေပြီ။ ကျုပ်ကောင်တွေလည်း စိတ်တိုင်းကျ လိုးဆော်ပြီးရော ကောင်မလေးလဲ မျော့မျော့လေးပဲ ကျန်တော့တယ်ဗျာ။
ကောင်မလေး မျော့မျော့လေးပဲ ကျန်တာကတကြောင်း၊ အချိန်မရတော့တာကတကြောင်း၊ သူ့ယောကျ်ား ဖြစ်သူရဲ့ မျက်နှာအိုမဲ့မဲ့လေးကို ထောက်ညှာတာက တကြောင်းမို့ ကျုပ်လဲ လီးတောင်နေပေမယ့် နောက်တစ်ချီ မလိုးဆော်ဖြစ်တော့ဘူး။ လင်ယောကျ်ားကြီး ရှေ့ထားပြီး သူ့မယားကို ဝိုင်းပြီး မုဒိန်းကျင့်ရတာ ကျုပ်ဖြင့် အဲ့အရသာကို အစွဲကြီး စွဲနေမိတော့တယ်ဗျာ……။
ဒီနောက်ပိုင်းတော့ ကျုပ်ကို ငမွဲဆိုပြီး နှိမ်ကြတဲ့ ရွာကို ပြန်ပြီး ကျုပ်မိဘတွေ ထားခဲ့တဲ့ အိမ်မှာ ပြန်နေလိုက်တယ်။ ထောင်ထွက်မို့ လူရာမသွင်းချင်ကြပေမယ့် နှိမ်ပေါက်တော့ လုပ်မရဘူးလေ ။ ကျုပ်က လူမိုက်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီလေ။
ရွာပြန်ရောက်ပြီး အခြေအနေအားလုံးကို လေ့လာပြီးနောက် ကျုပ်အလုပ်ချင်ဆုံး အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်လိုက်တော့တယ်။ ကြားဖူးလားတော့ မသိဘူး….။ “သူ့မယားလိုချင် သူ့လင် လှံနဲ့ထိုး” ဆိုတာလေ။ သူ့ကြောင့် ကျုပ်ထောင်ကျခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
သူ့ကို အရယူမယ်ဆိုပြီး ဆုံဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ သူ့ရည်းစားဆိုတဲ့ မြို့က အကောင်ကို ပြန်မလာနိုင်အောင် ကျုပ်ကောင်တွေနဲ့ ဖမ်းပြီး ထိုးကြိတ် ကန်ကြောက် ခြိမ်းခြောက် လွတ်လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကွမ်းတောင်ကိုင် မရွှေချောကို အတင်းအဓမ္မ ပေါင်းသင်း ယူခဲ့လိုက်တော့တယ်ဗျာ။ ဟဲ… ဟဲ…. အခုတော့ ကျုပ်မိန်းမ ဖြစ်နေပြီလေ။
ကျုပ်မိန်းမ နာမည်က ရွှေမှုံရတီ တဲ့ ။ သူညီမ နာမည်လေးက ငွေမှုံရတီ တဲ့ဗျာ ။ နာမည်လေးလှသလို လူလေးတွေကလည်း လှသဗျာ……။အတိုချုပ် ပြောရရင် ရွှေမှုံလေး အကြောင်းတော့ မပြောပြတော့ပါဘူးဗျာ။
လာပါပြီ လာပါပြီ….. ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ ။ ကျုပ် ဂွင်လေးရှိတုန်း လှုပ်ရှားပြီး ပြန်လာတာ ။ ခရီးထွက်တာ တပတ်လောက် ရှိပြီးဆိုတော့ အငယ်ကောင်က ငတ်နေတာလေဗျာ ။ ကျုပ် အသက်က ၃၀ နှစ် ဝန်းကျင်ပဲ ရှိသေးတာ။ ငထန်တစ်ယောက်ဗျ ။ အပြင်မှာလဲ အခြေအနေ မကောင်းလို့ မစားခဲ့ဘူးလေ။
နေ့လည်ခင်း အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကျုပ်မိန်းမကို အသေလိုးပစ်မယ်ဆိုပြီး အားခဲလာခဲ့တာ ။ ခယ်မလေးလား…..? ရှိလည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူးဗျာ ။ သူ့အတွက်က တစ်ခန်း၊ ကျုပ်တို့ လင်မယားက တစ်ခန်းဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကို လိုးဆော်တာပဲ။
အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ကျုပ်မိန်းမကို ရှာကြည့်တာ မတွေ့တာနဲ့ ရေချိုးဖို့ ရင်လျာလေးဖြင့် ထွက်လာတဲ့ခယ်မလေးကို မေးကြည့်မိတယ်။
“ငွေမှုံလေး ညည်းအစ်မ ဘယ်သွားလဲ”
“ရွာထဲ အလှူရှိလို့ ဝိုင်းကူဖို့ သွားတယ် “
“သြော်…..ဟုတ်လား.. သွားတာ ကြာပြီလား”
ကျုပ်လဲ အားခဲလာပေမယ့် မိန်းမက မရှိတော့ ရှိတဲ့ အရက်လေး သောက်ပြီး ဇိမ်နဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်လေး ဖွာရင်း စည်းစိမ်ခံနေတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ ပုလင်းထဲက အရက်လည်း တဝက်ကျော်ကျော် ကုန်သလောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ ရေချိုးပြီး ပြန်လာတဲ့ ခယ်မလေးက ဖင်လေး လှုပ်လီလှုပ်ရဲ့နဲ့ အခန်းထဲ ဝင်သွားတာတွေ့တော့ ကျုပ်လီးတံက အစာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ခေါင်းထောင်ကြည့်နေသလိုပဲ ထောင်ထလာပြန်တယ်လေ။
ကျုပ် သူ့အစ်မကို ယူခဲ့တုန်းက ခယ်မလေးက ငယ်သေးတယ်ဗျ ။ အခုတော့ဗျာ အပျိုပေါက်လေး ဖြစ်လာပြီး ရင်ထွားထွား တင်ကားကားလေးနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ အရပ်အမောင်းလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လှတယ်လေ။ ဖြူဝင်းလှတဲ့ အသားအရည်လေးနဲ့ မြင်ရသူအဖို့ ရင်ခုန်စေတော့တာပဲဗျာ။
ကျုပ်လဲ မထူးပါဘူးဆိုပြီး မရှိ ရှိတာလေးကို ဆွဲစားလိုက်တော့မယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ တစ်ထည်တည်းသော ပုဆိုးကို ခပ်တိုတို ဝတ်ပြီး ခယ်မလေး အခန်းလေးထဲကို လိုက်ဝင်လိုက်တော့တယ်ဗျာ။
အခန်းထဲရောက်ရင်ပဲ ထမိန်လေးကို ရင်လျာပြီး သီချင်းလေးညီးရင်း သနပ်ခါးသွေးနေတဲ့ ခယ်မလေး နောက်ပိုင်းအလှက ကျုပ်ကို နှာထန်စေတော့တယ်ဗျို့။ မှန်ထဲကနေ ကျုပ်ကို မြင်လိုက်တော့ ခယ်မလေး လန့်သွားပုံရတယ် ။ ကိုယ်လေးတစ်ချက် တွန့်သွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်လေ။ ပြီးတော့ နောက်လှည့်ကြည့်ကာ ကြောက်လန့်ဟန်လေးနဲ့
“ရှင်… ရှင် ငွေမှုံ အခန်းထဲ ဘာဝင်လုပ်တာလဲ အခုထွက်သွားနော်”
“ဟဲ… ဟဲ… ညည်းလေးကို ပျော်အောင် ပြုစုပေးမလို့ပါကွာ…..”
“ခွေးကြီး ….. မယုတ်မာနဲ့နော် အော်လိုက်မယ်”
“အော်လေ…… သေအောင်သာ အော် ဘယ်သူကြားမှာမို့လဲ”
ပြောလဲပြော ကျုပ်လဲ တစ်လှမ်းချင်း ရှေ့ကို တိုးတိုးသွားလိုက်တော့တယ်။ သူကလည်း ကြောက်ပြီး နောက်ကို တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ကာဆုတ်ကာနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ထရံနား ကပ်သွားတော့တယ်လေ။ သူလဲ ပြေးစရာ မလိုတော့သလို ကျုပ်လဲ လိုက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
“ဟဲ….. ဟဲ….. ငွေမှုံလေးရယ်…. မင်းလေး ကိုကြီးအလိုကို အသာအယာ လိုက်လျောလိုက်စမ်းပါကွာ….. အသားအနာမခံချင်စမ်းပါနဲ့လား……”
“မလုပ်ပါနဲ့ ကိုကြီးရယ် မသင့်တော်ပါဘူး ငွေမှုံ တောင်းပန်ပါတယ်နော်”
“လာပါကွယ် အတူတူ ပျော်ရအောင်ပါကွာ လာ အချိန်တွေ နှမြောစရာ”
“ရှင်…… ရှင်……. အနားမကပ်နဲ့နော်”
ကျုပ်က သူလက်မောင်းလေးကိုဆွဲတော့ သူကလည်း ရုန်းတယ်ဗျာ။ ကြာတော့ ကျုပ်လည်း လုပ်ချင်စိတ်ကများပြီး စိတ်က သိပ်မရှည်တော့တာနဲ့ သူမရဲ့ ပါးကို နှစ်ချက် ဆင့်ရိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် တွန်းလှဲပစ်လိုက်တော့တယ်။
ကျုပ်ရဲ့ ခယ်မလေး ကြမ်းပြင်ပေါ် ခွေခွေလေး လဲကျသွားချိန်မှာတော့ ကျုပ်လည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ သူမရဲ့ တစ်ထည်တည်းသော လုံချည်လေးကို အတင်း ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တော့တယ်။ ခယ်မလေးကလည်း ပြန်ဆွဲယူပေမယ့် ကျုပ်လက်ထဲပါလာပြီး အခန်းထောင့်ကို လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ အခုတော့ ခယ်မလေးလည်း မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ကိုယ့်လုံးတီးလေး ဖြစ်သွားတော့တယ်ဗျာ။
၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးခါစ အပျိုစင်လေးဖြစ်တဲ့ ခယ်မလေးရဲ့ နို့ဝန်းလေးတွေက လုံးဝန်းနေပြီး အသီးရဲရဲလေးတွေက စို့ချင်စရာလေး။ မွှေးညင်းနုနုလေးတွေနဲ့ ဝန်းရံထားတဲ့ မို့ဖောင်းဖောင်း စောက်ပက်လေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားများ စိကပ်ကပ်လေးနဲ့ အတော် ကြည့်လို့ ကောင်းလှတယ်ဗျာ။
တံတွေးကို မျိုချလိုက်ပြီး ပေါင်တွင်းသားကို အသာလေး ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူမ အနေနဲ့ ရုန်းထွက်လည်း မလွတ်နိုင်မယ့် အတူတူ ပြုသမျှ နုရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ငြိမ်ခံနေတော့တယ်ဗျာ။
“အ….. အ ….. အဟင့်”
ခယ်မလေးရဲ့ ပေါင်တွင်းသားကို ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်သတ်ပေးလိုက်ပြီး အပျိုစင်လေးအား ကာမအရသာကို အစွဲကြီး စွဲသွားအောင် စိတ်ကူးနဲ့ ရှယ်နူးနပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ ပေါင်းတွင်းသားက ကြက်သီးမွှေးညှင်းများ ထလာပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက် အထိအတွေ့ကို မခံစားဖူးသေးတဲ့ အပျိုလေးပီပီ စောက်ပတ်လေးထဲ အရည်များ စိမ့်ထွက်လာနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် လက်က ပေါင်ဂွစုံကို ရောက်သွားပြီး စိနေသော စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းလေးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
စောက်ပတ် အတွင်းသားက နူးညံ့လွန်းတော့ ကိုင်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျုပ်ရဲ့ ခယ်မလေးလည်း ပေါင်ကို မသိမသာလေး ကားပေးလာတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
“အ…… ဟားးး ….. အဟင့်”
ကျုပ်လည်း ခယ်မလေးရဲ့ ပေါင်ကြား ခေါင်းငုံ့လိုက်ပြီး ပေါင်တွင်းသားများကို လျှာနဲ့ ယက်ပေးလိုက်တော့တယ်။ အကြောစိမ်းများ သမ်းနေသော ပေါင်တွင်းသာ ဖွေးဖွေးနုနုကို ယက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျုပ်ရဲ့ ခယ်မလေး ဖင်ရှုံ့သွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ စောက်ပတ်လေးထဲ လီးတံကြီးနဲ့ ထိုးခံရတော့မည် အထင်နှင့် အံကြိတ်ထားနေပေမယ့် မထင်မှတ်ထားပဲ ကျုပ်ရဲ့ အပြုအမူကြောင့် ခေါင်းထောင် ကြည့်မိနေတာ တွေ့ရတယ်ဗျာ။
ကျုပ်လည်း စူပွ စူပွ ဖြစ်နေတဲ့ ခယ်မလေးရဲ့ ဖင်ပေါက်လေးကို လျှာနဲ့ ကလိကာ ယက်ပေးလိုက်တော့ ညည်းသံလေးများ ထွက်လာတော့တယ်။
“ရှလွပ်…… ဖလူးးးး.. … အီးးးးးး”
“အားးး……..ရှီးးးး.. … ကျွတ်စ်……..”
ခယ်မလေးရဲ့ ခါးလေး ကော့တက်လာပြီး ကြမ်းပြင်နဲ့ဖင် မထိနိုင်တော့ဘူး။ ခယ်မလေးရဲ့ ဖင်ဝလေးက တံတွေးတွေ စိုရွှဲနေပေမယ့် လက်ညှိုးလေး ထိုးသွင်းတာ ကြပ်လွန်းလို့ လက်တစ်ဆစ် ဝင်အောင် မနည်း ထိုးသွင်းရတယ်။ လက်တစ်ဆစ် ဝင်သွားတော့ ဖင်ပေါက်ထဲ ထုတ်လိုက်၊ သွင်းလိုက်၊ လှည့်မွှေလိုက် လုပ်ပေးပြီး စိကပ်နေသော စောက်ပတ်လေးကို ယက်ပေးနေမိတော့တယ်။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်…..
“အားးးး…. အဟင့်…… အီးးးး”
ကျုပ်ရဲ့ ခယ်မလေးတော့ ခါလေး ကော့တက်နေပြီး လက်သီးများ ဆုပ်ရင်း တွန့်တွန့်လူးကာ အကောင်းကြီး ကောင်းနေတော့တယ်ဗျာ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိမထားနိုင်တော့ပဲ ငွေမှုံလေးတစ်ယောက်ကတော့ ကျုပ်ရဲ့ စုပ်ယက်ပေးမှုအပေါ် မှိန်းမောသွားလေတော့တယ်။
ကျုပ်လည်း ဖင်ဝလေးထဲ မွှေပေးနေတဲ့ လက်ညှိုးကို တဖြေးဖြေးခြင်း ဖိသွင်းလိုက်ရာ လက်ညှိုး အရင်းအထိ ဝင်သွားပြီး စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားများကို ယက်လိုက်၊ စောက်စေ့လေးကို ဖိစုပ်လိုက်၊ စောက်ပတ် အတွင်းသားနုနုထဲ လျှာဖြင့် ထိုးမွှေလိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ
“ရှလွပ် ……..အ အ အ အ”
”ထွက်ကုန်ပြီ ထွက်ကုန်ပြီ “
“အားးးးး ရှီးးးးးး အားးးးးး အင်းဟင်းဟင်းးးးးး”
အပျိုရိုင်းလေး ကာမအရသာကို ခံစားရင်း တစ်ချီ ပြီးသွားလေတော့တယ်။ အပျိုစင်လေး ဖြစ်တာကြောင့် ပထမဆုံး အချီမှာပဲ စောက်ပတ်ထဲက အရည်တွေ အများကြီး ပန်းထွက်ကုန်ပြီး နုံးချိသွားကာ ရင်လေး ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နဲ့ အမောဖြေနေတော့တယ်။
ကျုပ်လည်း ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး အမောဖြေနေတဲ့ ခယ်မလေးအပေါ် တက်ခွပြီး သူ့ပါးစပ်လေးထဲ ကျုပ်လီးတံကို ထိုးသွင်းပေးမယ့် သူက ခေါင်းခါခါ လည်ခါခါ လုပ်နေတာနဲ့ ကျုပ်လည်း သူ့ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ ဖျစ်ညစ်ပြီး အတင်းထိုးထည့်လိုက်ရတော့တယ်။ အပျိုလေးဖြစ်ပြီး လီးမစုပ်ဘူးသေးတော့ ပျို့တက်လာတယ်ဗျို့။
ကျုပ်ကလည်း ခရီးကအပြန် ရေမချိုးရသေးတော့ လချီးနံ တလှိုင်လှိုင်နဲ့ လီးတံကို ပါးစပ်ထဲ လိုးသွင်းနေတော့တယ်လေ။ မစုပ်တတ် စုပ်တတ်နဲ့ ခယ်မလေး လီးစုပ်ပေးနေတာက အရသာတစ်မျိုးပဲ ။ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲဗျာ။
“အု အူးးးး ဝူးးးးး”
အာခေါင်ထောက်နေအောင် ခယ်မလေးရဲ့ ပါးစပ်ကို လိုးသွင်းရတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ အခုတော့ ကျင့်သား ရလာပုံပါပဲ။ ပါးစောင်းလေး ခွက်ဝင်အောင် စုပ်ပေးနေတာများ လီးတံကြီးက အကြော တပြိုင်းပြိုင်း ထလာပြီး ပါးစပ်ထဲ ပြည့်သိပ်နေတာပဲ။ ပြီးချင်းသလိုလိုတောင် ဖြစ်လာတာနဲ့ ခယ်မလေးကို လီးစုပ်နေတာ ရပ်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်။
“ဟိုးးး တော်ပြီ ရပ်တော့ ငါပြီးသွားလိမ့်မယ်၊ အခု မပြီးချင်သေးဘူးဟ၊ နင့် အပျိုစင် စောက်ပတ်လေးကို ဟော့ဒီ လီးတံနဲ့ လိုးချင်သေးတယ်”
“တော်ပါတော့ ကိုကြီးမုန်းရယ် ငွေမှုံလေးကို သနားပါဦး၊ ပြီးတော့ မမ ပြန်လာလို့ တွေ့သွားရင် မကောင်းပါဘူးနော်”
“နင့် အစ်မ လာတော့လည်း ဘာစောက်ဂရုစိုက်စရာ လိုလို့လဲ၊ ကဲ ကြာပါတယ်ဟာ … ဘာမှ စောက်ပိုတွေ ပြောမနေနဲ့တော့ နားငြီးတယ် “
ကျုပ်လဲ ပြောပြောဆိုဆို ခယ်မလေး ပေါင်းကြား ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်တော့တယ်။ အပျိုစင် နုနုထွဋ်ထွဋ် စောက်ပတ်လေးအား အပျိုရည်ဖျက်မည့် ဧရာမလီးတံကြီးကို ကိုင်ကာ စိကပ်နေသည့် စောက်ပတ် အကွဲလေးကို အထက်အောက် ပွတ်တိုက်ပေးနေရင်း လိုးသွင်းဖို့ အရှိန်ယူနေလိုက်တယ်။
ဒစ်ဖူးက တစ်ချက် တစ်ချက် စောက်စိရဲရဲလေးကို ပွတ်တိုက်သွားတော့ ခယ်မလေးမှာ ခါးလေး ကော့ကော့သွားတယ်။ စောက်ပတ်လေးမှာ နူးညံ့ ချောမွတ်လှပြီး လိုးချင်စရာကြီး ဖြစ်နေလေတော့ အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ပဲ ဒစ်ကို စောက်ပတ်အဝမှာ တေ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း ဖိသွင်းလိုက်ရာ
စောက်ပတ် အပေါက်မှာ ကျဥ်းပြီး ဒစ်မှာ ကြီးလွန်းတော့ ချော်ထွက်နေကာ မဝင်ဆန့်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ခယ်မလေးလည်း ဘယ်အချိန် လီးကြီး ဝင်လာမလည်းလို့ ရင်တမမဖြင့် လက်သီးဆုပ်ကာ ခြေဖျားများ ကုပ်နေရှာတော့တယ်။ ကျုပ်လည်း ဒစ်ကြီးကို တံတွေးဆွတ်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်လေးကိုလည်း တံတွေးဆွတ်ကာ လီးတံကြီးကို ကျကျနန ကိုင်ပြီး တေ့သွင်းလိုက်တော့တယ်။
“ဇွိ ဇွိ ဗျိ………အ……..”
ဒစ်မြုပ်ရုံ ဝင်သွားလေတော့တယ်။ ဒစ်အရင်းထိ မဝင်သေးဘဲ ချော်မထွက်ရုံသာ ရှိလေတော့ ခါးကို ဆတ်ကနဲ ဖိတွန်းလိုက်တယ်။
“ဇိ ဇိ ဇိ……. အားးးးးးးး”
လီးဒစ်ကြီး သုံးပုံတစ်ပုံခန့် နူးညံ့သော စောက်ပတ်ထဲ တစ်ထစ်ထစ် တရစ်ရစ် ဝင်သွားလေတော့တယ်။ လီးဒစ်ဖူးက စောက်ပတ်ထဲမှ အပျိုမှေးလေးကို ထောက်နေမိတော့တယ်။
ကျုပ်လည်း ဆက်မသွင်းသေးပဲ ဝင်သလောက်လေးကို မှန်မှန်လေး လိုးပေးလိုက်တယ်။ ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်လေး လိုးဆောင့်ရင်း ခယ်မလေးရဲ့ အပျိုစင် နို့လုံးဝန်းဝန်းလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပေးနေမိတယ်။ပါးစပ်ကလည်း ပန်းနုရောင်သမ်းနေတဲ့ နို့သီးလေးကို စုပ်ယူစို့ပေးရင်း အလိုးခံချင်း အရသာကို စွဲလန်းစေဖို့ နူးနပ်ပေးနေတော့တယ်။ စောက်ပတ်လေးထဲ လီးအညှောင့်ခံနေရသလို နို့လေးတွေကိုလဲ အစို့ခံနေရတော့ ခံရသူ ခယ်မလေးအဖို့ ကာမစည်းစိမ် တွေ့နေတော့တယ်။
လီးတံကို ဒစ်မြုပ်ရုံ အပြင်ထုတ်လိုက်ပြီး အားပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ချက်တည်း ဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်။
“အင့် ဗလစ် တစ် တစ်…. ဗျစ် …ဗျစ် … ဒုတ်”
“အားးး သေပါပြီတော့ ….. နာတယ် …… နာတယ် ……. အီးးးဟီးးးဟီးးးး”
တစ်ချက်တည်းနဲ့. လီးတံကို အဆုံးထိ ဝင်သွားအောင် ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တယ်။ ဒစ်ဖူးကြီးက စောက်ပတ် အတွင်းသား နုနုများကို ပွတ်တိုက်ရင်း အပျိုမှေးပါးလေးအား ရက်စက်စွာ ထိုးခွဲပစ်လိုက်တော့တယ်။
အပျိုမှေးပါးကို လိုးခွဲရုံမက သားအိမ်ကို ဝင်ဆောင့်လိုက်လို့ အပျိုစင် ပါကင်လေးဖြစ်တဲ့ ခယ်မလေးတော့ တော်တော်လေး နာကျင်သွားပုံရတယ်။ လက်က ကျုပ်ရင်ဘက်ကို တွန်းထုတ်နေပြီး ပါးစပ်ကလည်း မချိမဆန့် ဇွတ်အော်နေတော့တယ်လေ။
ကျုပ်လည်း အရှိန်မပြတ်အောင် လီးကို ဒစ်မြုပ်ရုံ ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး ဆယ့်လေးငါးချက် ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။
“အင့် .. အီးးးး”
“ဗျွတ် ဗျွတ် ဗျစ် ဗျစ် … အားးးးးး အင့်… ဗျိ ဗျိ ဗွတ် ဗွတ်”
“အီးးးးး ဟီးးးး ဟီးးးးး နာတယ် နာတယ်”
“အင့်….. ဇွိ ဇွိ ဗျစ် ဗျစ် …”
“အူးးးး ဟူးးးး ဟူးးးးး”
“အပျိုအမှေးပါး စုတ်ပြဲသွားလို့ပါကွယ် ငြိမ်ငြိမ်လေး နေနော်၊ အစမို့ပါ တဖြည်းဖြည်း ကောင်းလာလိမ့်မယ် သိလား ငွေမှုံလေးရဲ့….”
“မသိဘူး… အဟင့် … အရမ်းနာတာပဲ သိတယ်”
လီးတံကြီးမှာ ခယ်မလေး စောက်ပတ်က ထွက်လာတဲ့ သွေးတွေ ပေပွနေပြီး အရည်ပြား အဖတ်လေး ကပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ စောက်ပတ်လေးမှာ ကြပ်သိပ်ပြီး အရိုးနုလေး ဝါးရသလို လိုးရတာ အရမ်းကောင်းလွန်းလှတယ်ဗျာ။
စောက်ပတ်လေးက ကျဉ်းလွန်းပြီး လီးတံက တုတ်တုတ် ရှည်ရှည်မို့ စောက်ပတ်က ညစ်အားကောင်းတာကြောင့် လီးထိပ်ကို သရေပင် စီးထားသလို ကျင်တက်နေအောင် ကောင်းလှတယ်။ ကျုပ်ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက် ပြင်းပြင်းအောက်မှာ ခယ်မလေးလည်း ကိုယ်လုံးလေး ယိမ်းထိုးနေတော့တယ်။
နာကျင်မှုကြောင့် အော်ဟစ် ညည်းတွားနေတဲ့ ခယ်မလေးရဲ့ အသံစူးစူးလေးက ကျုပ်ကို ရမ္မက်စိတ် ထန်စေသည့်အပြင် လိုးဆောင့်မှုကို မနားချင်ပဲ လိုးပြီးရင်း လိုးချင်စေတော့တယ်။ ခေါင်း ဘယ်ညာ ရမ်းကာ ရှုံ့မဲ့နေသော ခယ်မလေးရဲ့ မျက်နှာအား ကြည့်ရင်း လိုးဆောင့်ရတာ အရမ်းကို အရသာ ရှိလှတယ်ဗျာ။
ခယ်မလေးလည်း နာကျင်မှု့နဲ့အတူ ကြပ်သိပ်စွာ ဝင်လာတဲ့ လီးတံကို ညစ်ရင်းညစ်ရင်း ဆောင့်ချက်နဲ့အညီ ပင့်ပင့်ပြီး ခံနေပုံက အလိုးခံချင်း အရသာကို စွဲလန်းစေတော့တယ်ထင်ပ။ ကျုပ်များ မဆောင့်ပဲ နေရင် သူက ပင့်ပင့်ခံရင်း လီးတံ ကျွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးရိမ်စိတ်လေးဖြင့် ကာမအရသာကို အရူးအမူး စွဲလန်းနေပုံပါပဲဗျာ။
ကျုပ်သိလိုက်တာကတော့ ဒီကောင်မလေးကို ကျုပ် ဘယ်အချိန်လိုးလိုး ရနေပြီ ဆိုတာပါပဲဗျာ။
“ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်”
“ဗျိ ဗျိ ဗျစ် ဗျစ် အီးးးး”
“အ အ အ အ အားးးးး ရွီးးးးးး ဟားးးးးးးး”
ကျုပ်ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်ကို ဟန်ချက်ညီညီ အလိုးခံရင်း ခယ်မလေး ပြီးချင်လာပုံရတယ်။ အသားချင်း ထိခတ်သံတွေ မြိုင်ဆိုင်နေသလို ခယ်မလေးရဲ့ ကောင်းလွန်းလို့ ညီးသံသဲ့သဲ့လေးနဲ့အတူ ကိုယ်လေး တွန့်တွန့်လူး ခါနေပြီး ခယ်မလေး စောက်ရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်တယ်။ ကျုပ်လည်း အပျိုစင် ခယ်မလေးရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လိုးဆော်ရတာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလှပြီး အရမ်းကောင်းလွန်းတာကြောင့် သုတ်မထိန်းနိုင်ပဲ ခယ်မလေးနဲ့ ပြိုင်တူလိုလို လရည်ပျစ်ပျစ်တွေကို သားအိမ်လေးထဲ ဒလဟော ပန်းထုတ်လိုက်တယ်တော့ဗျာ။
“အီးးးး ဟီးးးး ဟီးးးး ဟီးးးးးး”
“အမလေးးး အဟင့် ထွက်ပြန်ပြီ ရှင့်…. အ…. အ…. ဆောင့် နာနာလေးဆောင့် အရမ်းကောင်းတာပဲ”
“အေးပါကွာ ……ကိုကြီးလည်း ပြီးတော့မယ်…. ရော့…. အင့် …… ကဲကွာ…. အ…. အ…. လိုးရတာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလိုက်တာကွာ……”
ကျုပ်လည်း လရည်တွေ အကုန် ပန်းထုတ်ပြီး လီးတံကို ချွတ်လိုက်တော့ ခယ်မလေး စောက်ခေါင်း အဝလေးက အရင်လို စိမနေတော့ပဲ ပွစိပွစိ ဖြစ်နေပြီး ကျုပ်လရည်တွေနဲ့ အတူ စောက်ရည်တွေပါ စီးကျလာတာကို တွေ့ရတယ်။ ခယ်မလေး မောဟိုက် နွမ်းနယ်နေသလို ကျုပ်လည်း ပါကင်လေးကို လိုးဆော်ရတာကြောင့် အရမ်းပင်ပန်းနေတော့တယ်။
ခယ်မလေးလည်း အပျိုစင်ပန်းလေးကို ခဲအိုရဲ့ ဆွတ်ခူး စားသုံးခြင်း ခံရလေတော့ ဝမ်းနည်းစွာ ငိုရှိုက်နေလေတော့တယ်။ နှစ်ယောက်သား အမောဖြေနေတုန်းမှာပဲ ကျုပ်မိန်းမ ရွှေမှုံ နာကျင်ဟန်လေးနဲ့ ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။
“ဒါက ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ လူယုတ်မာကြီးရဲ့ အစ်မကို အဓမ္မ ယူရုံမက ညီမကိုပါ ခြေတော်တင်တယ်ပေါ့လေ”
“စောက်ကောင်မ စောက်စကား မရှည်နဲ့ နှစ်ယောက်စလုံး မသာပေါ်သွားချင်တာလား”
“လာ ညီမ​‌‌လေး ဒီအိမ်မှာ မနေဘူး ထွက်သွားမယ်”
“အေး ထွက်လဲ ထွက်ကြည့် အသေပဲမှတ် ကြားလား”
“မမရယ် တော်ပါတော့ လူကြားလို့ မကောင်းပါဘူး အဟင့် …..”
“ကောင်မ ရှည်ဝေးဝေး ပြောမနေနဲ့ အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်ပြီး ငါလီး လာစုပ်စမ်း….”
ရွှေမှုံလဲ လင်တော်မောင်ကို ကြောက်ရသူပီပီ တစ်ရှက်က နှစ်ရှက် မဖြစ်ရလေအောင် လင်တော်မောင်ရဲ့ အလိုကျ အဝတ်အစားများ တစ်ခုမကျန် အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ညီမလေးကို လိုးထားလို့ ပေပွနေတဲ့ သွေးစတွေ စောက်ရည်တွေလူးနေတဲ့ လီးတံကြီးကို ကိုင်ပြီး ဒစ်ဖူးလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ယက်ပြီး ပြွတ်ကနည်း မြည်အောင် ငုံစုပ်ပစ်လိုက်တော့တယ်။
“အု….. အု….. ဝု…..”
လရည်ထွက်ထားလို့ ပျော့ကျနေတဲ့ လီးတံက ရွှေမှုံလေး စုပ်ယူလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်တည်း တဖန် ထောင်ထလာပြန်တယ်။ သရေတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတဲ့ လီးတံကြီးက အကြောတွေ ထောင်ထလာပြီး ရွှေမှုံလေးရဲ့ အာငွေ့နွေးနွေးကြောင့် သံချောင်းကြီးအလား မာထန်လာပြန်ပါတော့တယ်။
မိုးထိုးကာ တောင်မက်လာတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ လီးတံကြီးကို လက်ဖဝါး နုနုဖြင့် ကိုင်ကာ အရည်ပြားကို ဆွဲချလိုက်ပြီး အရည် စိုလဲ့နေသည့် ဒစ်ထိပ်ရှိ အကွဲကြောင်းအား လျှာဖြင့် ကလိကာ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ငုံစုပ်လိုက်ပြန်တယ်။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်”
“အိုးးး ဟိုးးးး ရွီးးးး”
ဒစ်ဖူးကို လျှာဖြင့် ဝိုက်လိုက်၊ လီးတံကို ငုံကာ ပါးစပ်ဖြင့် ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ငုံစုပ်လေး လုပ်ပေးနေပြီး လင်တော်မောင်အကြိုက် ရှယ်ကို စုပ်ပေးနေတော့တယ်။
ကျုပ်လည်း လီးစုပ်တာ ရပ်ခိုင်းပြီး ညီအစ်မ နှစ်ယောက်စလုံးကို လေးဘက်‌ထောက် ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကနေ လက်ဝါးနဲ့ ဖင်လုံးလေးတွေကို ခပ်စပ်စပ် ရိုက်ချလိုက်တယ်။
ညီအစ်မ နှစ်ယောက်လုံး ဖင်လေး နောက်ပစ်ပြီး လေးဘက်ကုန်းပေးထားတော့ သူ့တို့ စောက်ပတ်လေးတွေက ပြူပြူလေး စူထွက်နေတယ် ။ ကျုပ်လည်း အကြီးမရဲ့ အနောက်ကနေ ဒူးထောက် နေရာယူလိုက်ပြီး ပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လီးတေ့ပြီး ခါးကို ကိုင်ကာ ဒေါ့ကီစတိုင် လိုးဆော်ပစ်လိုက်တယ် ။ အချက်တစ်ရာလောက် လိုးဆော်ပြီး အငယ်မလေး တစ်လှည့် လိုးဆော်ပေးမိပြန်တယ်။ ကျုပ်အကြိုက်ဆုံးပုံစံနဲ့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်လုံးကို တပြိုင်းတည်း လိုးဆော်ရတာ ကျုပ်အတွက်တော့ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်လို့ အကောင်းကြီးကောင်းကာ ကာမသုခ အရသာကို အပြည့်အဝ စံစား ခံစားနေမိတယ် ။
“ဖတ် ဖတ် ပြွတ်စ် ပြွတ်စ်”
“ရှီးးးးးးးး အဟင့်…….အ …..အ…..”
အသားချင်း ထိခတ်သံတွေ ၊ လီးဝင် လီးထွက်သံတွေ၊ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ကောင်းလွန်းလှလို့ ထွက်လာတဲ့ ညီးသံလေးတွေက မြိုင်ဆိုင်နေပြီး ဂီတရသ တစ်ခုကို နားဆင်နေရသလို့ နားဝင်ချိုလှတယ် ။ အစောက အငယ်မနဲ့ တစ်ချီ ကောင်းကောင်းပြီးထားပေမယ့်လည်း ညီအစ်မ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အပေးအယူမျှမျှ ညှစ်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ စောက်ပတ်တွေကို လိုးသွင်းနေရတော့ အရသာက ပြောမပြတတ်အောင် ကောင်းလွန်နေလေတော့ ကျုပ်လည်း မထိန်းနိုင်ပဲတော့ ပြီးချင်လာပြန်တော့တယ်။
အဲဒါနဲ့ပဲ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်လုံးကို ဒူးထောက် ထိုင်ခိုင်းပြီး ဟထားတဲ့ ပါးစပ်လေးတွေပေါ် လီးတံကြီးကို လက်နဲ့ကိုင်ထုရင်း လရည်တွေကို ပန်းချလိုက်တော့တယ်။ ပန်းထုတ်ပြီးစ လီးတံကို နှစ်ယောက်သား တစ်လှည့်စီ လုပြီး စုပ်နေလိုက်တာများ တကယ် အရသာရှိလှတယ်ဗျာ။ နောက်ပိုင်းတော့ အငယ်မလေးကိုလည်း သူ့အစ်မလိုပဲ အပေါက်စုံ ခံနိုင်အောင် လေ့ကျင့် လိုးဆော်ပေးနေရင်း မယားအဖြစ် သိမ်းပိုက်လိုက်တော့တယ်။
အဲ့နေ့ကစလို့ ကျုပ်လဲ မယားနှစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ တစ်ယောက်တစ်ခန်း မအိပ်ကျတော့ပဲ ကျုပ်ကို အလယ်ကထားပြီး ဘယ်ညာ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ နေရာယူ အိပ်ကျလေတော့တယ်ဗျာ။
အခုဆို ကျုပ်လည်း မကြာမီ ရောက်လာတော့မယ့် လွတ်ရက်ကို လက်ချိုး ရေတွက်လို့ မျှော်လင့်စောင့်စားနေမယ့် မယားများဆီ အရောက်လှမ်းဖို့ အားမွေးရင်း စောင့်မျှော်နေလေတော့သတည်း………..။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 4,911
← ပါကင်ဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့ အပျိုမလေးနှစ်ယောက်